प्रवास – shubhabihani
काठमाडौँ — एक महिनाअघि ओमन पुगेका २० नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन् । अनेस्टी ओभरसिजलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख २० हजारसम्म तिरेर गएका उनीहरु रोजगारी तथा गाँसबासको अभावमा दयनीय अवस्थामा पुगेका हुन् ।
मुवाराद वादी मोर्डन ट्रेड कम्पनीमा स्काफफोल्डिङको काम गर्न भनी डिसेम्बर २६ मा गएका उनीहरु अहिले ओमनको राजधानी मस्कटबाट झन्डै तीन सय किलोमिटर टाढा सोहरमा अलपत्र अवस्थामा छन् ।
बिहीबार साँझ कान्तिपुरसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै फालासी रामेछापका यमबहादुर चौहानले भने, ‘यतिबेलासम्म हामीलाई खाना दिइएको छैन । हिजो रोटी ल्याएर दिएको थियो । अस्ती बासी भात खान दिएको थियो ।’ ओमन पुगेदेखि नै कम्पनीले काम दिलाउन सकेको छैन । ‘पैसा माग्दा तिमीहरुले कामै गरेको छैन । कसरी पैसा दिन सकिन्छ भन्छ,’ उनले भने, ‘आँउदा ओमनी १० रियाल दिएको थियो । त्यसले सीम र ब्लालेन्स हाल्दा सकियो ।’
धनुषाका रामललित यादवले आफूहरुलाई चिसो भुइँमा विस्तारा लगाएर राखेको बताए । ‘हामी २० जना आएको थियौं । ११ जनालाई एउटा पुरानो घरमा ल्याएर राखेको छ । सुत्ने बेड छैन । भुइँमा ओछ्यान लगाएर बसेका छौं । खाना बनाउने भाँडाकुँडा पनि छैन,’ उनले भने, ‘बाँकी ९ जनालाई साइडमा लगेर राखेको छ । उनीहरुलाई कस्तो ठाउँमा लगेर राखेको छ ? हामीले बुझ्न पाएका छैनौं ।’
म्यानपावरले मासिक एक सय २० ओमनी रियाल तलब पाउने गरी पठाएको थियो । ‘हिजो कम्पनीबाट भन्दै पाकिस्तानी आएको थियो । उसले काम गर्ने साइड देखायो । सडक खन्नुपर्ने भन्यो । हामी सबै स्काफफोल्डिङ कामको लागि आएका हौं । सडक खन्ने काम गर्न सक्तैनौं,’ प्युठानका वसन्त गिरीले भने, ‘काम नगर्ने भए चार सय रियाल (एक लाख ५ हजार रुपैयाँ) बुझाए मात्रै पठाउने कुरा गर्छ ।’
पीडितहरुले कम्पनीको कार्यालय नै नभएको बताए । ‘कम्पनीको अफिस नै छैन रहेछ । एउटा टेवुल मात्रै छ । त्यसमा कोही बस्दैन,’ कैलालीका शेरबहादुर खत्रीले भने, ‘कम्पनीका मान्छे बताउनेले हाम्रो पताका (परिचयपत्र) र एटिम पनि लिएर गएको छ ।’ पीडित कामदार सबै खाडीका विभिन्न देशमा काम गरेका अनुभवी हुन् । उनीहरुले उद्धारको लागि म्यानपावर र एजेन्टलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा सुनुवाई भएको छैन । ‘हाम्रा परिवारहरु म्यानपावर अफिस धाइरहेका छन् । म्यानपावरले उल्टो कम्पनीबाट काम दिएको र खान बस्ने व्यवस्था राम्रो भएको भन्दै तर्किन्छ,’अर्का पीडित गोरखाका गोकर्ण त्रिपाठीले भने, ‘हामीलाई यहाँ मरुभूमिमा ल्याएर बिजोग बनाएर राखेको छ ।’
गैरआवासीय नेपाली सामाजिक क्लबका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले पीडितको अवस्था निकै नाजुक अवस्था देखिएकोले तुरुन्त उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । पीडितको अवस्था बुझ्न क्लबबाट प्रतिनिधि सोहर पुगेको थियो । पीडितहरु ओमनस्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा छन् । ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुलीले कम्पनीका प्रतिनिधिसँग निरन्तर सम्पर्मा रहेको बताइन् । ‘यो समस्या समाधान गर्नको लागि कम्पनीले दूतावाससँग सात दिनको समय मागेको छ,’पराजुलीले कान्तिपुरलाई भनिन्, ‘सात दिनभित्र यहाँ समाधान नगरेमा नेपालीलाई स्वदेश पठाउन ओमन सरकारसँग समन्वय गर्नेछौं ।’
काठमाडौँ — करिब एक वर्षअघि राजधानीको एक नाम चलेको कलेजका अध्यापकलाई एक दिन मिल्ने साथीले सुनायो, ‘बैंककमा रहेको साथीले अमेरिका पठाइदिन्छु भनेको छ ।
डिपार्टमेन्ट स्टोरको काम पनि उसैले मिलाइदिन्छ रे, तलब डेढ लाखको हाराहारी हुन्छ । के छ विचार ?’ आर्थिक समस्याले गुज्रिरहेका बेला ती प्राध्यापकले दायाँबायाँ सोचेनन् । उनी साथीकै सल्लाहमा केही दिनमै थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक पुगे । त्यहाँ पुगेर उनले भेटे, आफूलाई अमेरिका लगिदिन्छु भन्ने पर्शुराम गुरुङलाई ।
केही दिनको बसाइपछि उनलाई पर्शुरामले भिसा आउनै लागेको भन्दै पाँच लाख रुपैयाँ आफूले भनेको मान्छेको खातामा हाल्न भने । अध्यापकले भनेअनुसार गरे । तर खातामा पैसा जम्मा गरेको भोलिपल्टैदेखि पर्शुराम सम्पर्कविहीन भए । युरोप, अमेरिका र मकाउ पुगेर मनग्गे कमाउने आश्वासनको पासोमा बैंकक पुगेर ठगिनेमा ती अध्यापक एक्ला पात्र होइनन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बैंकक बसेर ठगी धन्दा चलाइरहेका पर्शुरामबाट ठगिनेहरू तीन सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरेको छ । ब्युरोमा उनीबाट ठगिनेहरूको दर्जनौं उजुरी छन् ।
भोजपुरको हेलौचा पुख्र्यौली घर भई बैंकक बस्ने पर्शुरामका कतिवटा नक्कली नाम छन् र उनी कति नाममा फेसबुक चलाउँछन् भन्नेबारे प्रहरीसँग कुनै निष्कर्ष छैन । तर उनले फेसबुकमार्फत मान्छेहरूसँग सम्बन्ध बढाउँछन्, आत्मीय भएको नाटक गर्छन् र कसैलाई आफू अमेरिकाको ग्रिनकार्ड होल्डर भएको त, कसैलाई क्यानडाको पीआर भएको झूटो विवरण दिएर आकर्षित गर्छन् । साथी बनेको केही समयमै उनले अमेरिका, क्यानडा र मकाउ पठाइदिन सक्ने कथा बुन्छन् । त्यही कथाको पासोमा परेकाहरू उनको कुराकै भर परेर बैंकक पुग्छन् ।
त्यहाँ पुगेलगत्तै पर्शुराम सपनाको कल्पनामा रमाएकाहरूलाई भेट्छन् र क्रमश: पैसा असुल्न थाल्छन् । ब्युरोका अनुसार धेरै जनाले प्रोसेसका नाममा सुरुमै डेढ लाख बुझाएका छन् । चलाख पर्शुरामले कतिपयलाई भने नेपालकै एजेन्टलाई रकम बुझाउन अह्राएका छन् भने कतिपयसँग बैंककमै रकम बुझेका छन् ।
एक पीडितका अनुसार पर्शुरामले औसतमा प्रतिव्यक्ति सातदेखि दस लाख ठगी गरेका छन् । ती पीडितको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै पर्शुरामले करिब तीस करोडको हाराहारीमा ठगी गरिसकेका छन् । काठमाडौंमा होटल चलाएर बसेका एक पीडितले आफूले क्यानडा जाने सपनाको पछि लागेर पर्शुरामलाई १५ लाख रुपैयाँ बुझाएको बताए । केही लाख हात परेपछि पर्शुराम सम्पर्क बाहिर बस्छन् र पीडितहरू अनेकन आफन्त र साथीभाइको हारगुहारपछि नेपाल फर्किन बाध्य हुन्छन् ।
स्रोतका अनुसार पर्शुरामको ठगीबारे तीन वर्षदेखि नै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी पर्न थालेका थिए । त्यस्तो उजुरी पर्ने क्रम अहिलेसम्म रोकिएको छैन । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीकै अधिकारीसमेत पर्शुरामको ठगी धन्दाको पासोमा परेका छन् । विदेशी भूमिमा बसेर चलिरहेको पर्शुरामको ठगी धन्दा रोक्ने ब्युरोको अनेक प्रयास सफल भइसकेको छैन । प्रहरी स्रोतले पर्शुरामले थाई युवती बिहे गरेर उतैको नागरिकता लिएको पनि सुइँको पाएको छ । तर त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आधार भने फेला परिसकेको छैन ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको पहलमा नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखाको अनुरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन (इन्टरपोल) ले पनि पर्शुराममाथि २०७२ असार २९ मा डिफ्युजन नोटिस जारी गरिसकेको छ । इन्टरपोल शाखाकी एसपी किरण वज्राचार्यका अनुसार अदालतबाट पक्राउ पुर्जीको आदेश नभएको अवस्थामा डिफ्युजन नोटिस जारी गरिन्छ । उनले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘यस्तो नोटिस जारी भएको व्यक्तिको गतिविधि निगरानीमा हुन्छ ।’ वज्राचार्यका अनुसार पर्शुराममाथि ठगी र मानव तस्करी दुवै अभियोग छ । उनले आफू ब्युरो छँदा पनि कैयन् पीडित हूल बाँधेर आउने गरेको अनुभव सुनाइन् ।
स्रोतका अनुसार केही साताअघि मात्रै पर्शुरामको ठगी धन्दाबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख डीआईजी पुष्कर कार्कीले काठमाडौंस्थित थाई दूतावासलाई पनि जानकारी गराएका थिए । कार्कीले शृंखलाबद्ध ठगीको घटनाबारे थाइल्यान्डस्थित नेपाली दूतावासमा पनि जानकारी गराइएको बताए । उनले भने, ‘कैयन् पीडित सार्वजनिक हुन चाहिरहेका छैनन् । तर ठगिनेको संख्या ठूलो छ ।’ ब्युरोका प्रवक्ता एसपी जीवन श्रेष्ठका अनुसार पर्शुरामविरुद्ध मानव बेचबिखन र ठगीका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।’
पुस ४, २०७४-पारिवारिक विवादले धरासयी बनेको कुवेतको ठूलो कम्पनी खराफी नेशनलमा कामविहीन भएर बसेका झन्डै दुई सय नेपाली कामदारको खाना सोमबार बिहानदेखि पुन: बन्द भएको छ । त्यस कम्पनीमा भारतीय, फिलिपिनोसहित झन्डै चार हजार कामदार समस्यामा परेका छन् ।
मंसिर २७, २०७४-पारिवारिक विवादले मालिकविहीन बनेको कुवेतको नेसनल खराफी कन्स्ट्रक्टिङ कम्पनीबाट तलब र काम नपाएका २ सय नेपाली कामदारको टिकट र जरिवाना कसले ब्यहोर्ने भन्नेमा सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा उद्धार प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न जरिवाना र टिकटको व्यवस्थाका लागि परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो । दूतावासको पत्रको जवाफ सरकारले दिएको छैन ।
‘वैदेशिक रोजगार ऐनले ओभरस्टे भएका कामदारको जरिवाना तिर्ने विषय स्पष्ट गरेको छैन । विगतमा जरिवाना दिएको अनुभव पनि छैन,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी छलफलमै छौं । हाम्रो तहबाट हुने निर्णय गर्छौं ।’
अलपत्रमध्ये नाजुक आर्थिक अवस्थाका २० जनाको जरिवाना तिर्न एसओएस म्यानपावरले २५ सय कुवेती डिनार (करिब ९ लाख रुपैयाँ) नेपाली दूतावासलाई पठाइदिएको छ । ती २० जनालाई नेपाल पठाउन दूतावासले प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ । ‘जरिवाना तिर्न राजी भएपछि हामी २० जनालाई कम्पनीले राहदानी दिइसकेको छ,’ धुरकोट–३ गुल्मीका सुरेश कुँवरले भने, ‘बुधबारै कुवेतको श्रम विभागमा निवेदन दिएका छौं । अब छिट्टै स्वदेश फर्किन पाइएला भन्ने आस छ ।’ कम्पनीमा २ सय २० दिनसम्म कामविहीन भएर बसेका कामदारसमेत छन् । ‘दुई वर्षदेखि मेरो भिसा नवीकरण भएको छैन । २ सय २० दिनदेखि कोठामै सुताएर राखेका साथीहरू पनि छन् । म आफैं १ सय २५ दिनदेखि कामविहीन छु,’ उनले भने, ‘नेपाल फर्किन ५ पटकभन्दा बढी दूतावास गयौं । कतैबाट केही भएन ।’
कुँवरका अनुसार क्याम्पमा झन्डै ४ सय नेपाली कामविहीन छन् । ‘सबै साथीलाई दूतावास जाऊँभन्दा कम्पनीले काम दिन्छ कि भनेर बसेका छन् । ९४ जनाले मिले आजै फर्कन्छु भन्दै दूतावासमा निवेदन दिइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘कामदारलाई ८ महिनादेखि तलब दिइएको छैन । काम पनि दिइएको छैन । दाल र भात खुवाएर क्याम्पमा राखेको छ ।’
दूतावासले पीडित नेपालीको यथाशक्य उद्धार आवश्यक रहेको बताएको छ । पारिवारिक विवादले कम्पनीको जिम्मेवारी लिने व्यक्ति नभएकाले कम्पनीबाट टिकट र जरिवाना ब्यहोर्ने अवस्था नरहेको भन्दै दूतावासले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
पारिवारिक विवादले कम्पनी जिम्मा लिने सञ्चालक नै नभेटिँदा कामदारको बिचल्ली
९४ जनाले स्वदेश फर्कन दूतावासमा निवेदन दिए पनि बाँकी कामदार अझै कम्पनीले काम र बक्यौता तलब दिने आसमा छन्
‘६ महिनादेखि कामदारको समस्या सुल्झाउन कम्पनी व्यवस्थापनसँग पटकपटक छलफल भयो,’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले भने, ‘कम्पनीमा जिम्मा लिने मालिक नै फेला परेन । व्यवस्थापन हेर्ने उच्च कर्मचारीले पनि कम्पनी छाडिसके । यसले समस्या थप बल्झँदै गयो ।’ खराब दिशातर्फ उन्मुख भएपछि कम्पनीले कामदारको टिकट खर्च र जरिवाना तिर्न राजी भए कामदारको राहदानी फिर्ता गर्ने जानकारी म्यानपावर र दूतावासलाई गराएको थियो । नेसनल खराफीको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको आर्थिक अवस्था खस्किएपछि सञ्चालक परिवारका सदस्य यसको जिम्मेवारीबाट पछि हटेका हुन् । जसका कारण नेपालीलगायत भारतीय र फिलिपिनो कामदारसमेत समस्यामा छन् ।
राजदूत हमालले भारत र फिलिपिन्सका दूतावाससँग मिलेर साझा समाधान खोज्ने प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताए । ‘यसबाट पनि पार लागेन । ती देशले आफ्नो ढंगले आफ्ना नागरिक चरणबद्ध रूपमा पठाउन थालेका छन् । स्रोतको अभावमा हामीले कामदार पठाउन सकेका छैनौं,’ हमालले भने । त्यस कम्पनीमा सबभन्दा बढी एसओएस म्यानपावरले कामदार पठाएको छ । ‘कम्पनी आर्थिक रूपमा संकटमा छैन । कम्पनीको जिम्मेवारी लिने कोही भएन । यसमा म्यानपावरलाई मात्रै दबाब दिएर सरकार पन्छिन मिल्दैन,’ एसओएसका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले पनि आफ्नो तहबाट जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हाम्रो पाटोको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं ।’
गुरुङका अनुसार त्यस कम्पनीमा अन्तिम पटक २०१५ नोभेम्बरमा कामदार पठाइएको थियो । ‘दूतावासले प्रमाणित गरेको मागपत्रमा हामीले कामदार पठाएका हौं । जानेबित्तिकै कामदार समस्यामा परेका होइनन् । समस्यामा पर्ने सबै पुराना कामदार हुन्,’ उनले भने, ‘कामदारको उद्धार खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट ब्यहोरिनुपर्छ ।’
खोतिला भन्ने स्थानमा जीप दुर्घटनामा परि एकै घरका ३ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा दार्चुला, पीपलचौर सौतलीका हिरादेवी बम उनका छोरा ओमकार र छोरी प्रियंका रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । त्यस्तै दुर्घटनामापीपलचौरीकै डम्बरी बम र माधुरी बम घाइते छन् । दुर्घटनामा परी २ जना भारतीय नागरिक पनि मृत्यु भएको छ ।
युके ०५ पीए १२८१ नम्बरको जीप भारतको गर्भाधारबाट धार्चुलातिर आइरहेका बेला खोतिला भन्ने ठाउँ विहीबार दिउँसो पहिरोमा परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पहिरोले जीप पुरिदा जीपमा सवार ३ जना नेपाली तथा २ जना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ भने २ जना घाइते भएका छन् ।
नेपालतिर बाटो नहुदा दार्चुलाको दुहू क्षेत्रका स्थानीयहरु सदरमुकाम खलंगा आउन पनि भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
९ असार, काठमाडौं । श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले कतारमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले त्यहाँ कार्यरत नेपालीलाई कुनै असर नगरेको बताएका छन् ।
कतारको पछिल्लो अवस्थाबारे आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत प्रभावकारी रुपमा वि्रफिङ गरेको उनले बताए ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री मन्सुरले रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा रहेका ४ लाख नेपाली कामदारबारे आफूले सम्पूर्ण जानकारी लिएको बताए ।
आफूले कतारका लागि नेपाली राजदूतसँग कूरा गरेको भन्दै उनले भने, ‘त्यहाँ जुन विकसित स्थिति छ, त्यसले नेपालीको रोजगार र पेशा व्यवसाय केही फरक पार्दैन, कतार आँफैमा दक्ष र सक्षम छ भनेर जवाफ दिनुभएको छ ।’
उनले अघि भने, कतारले पनि अन्य असन्तुष्ट मुलुकसँग वार्ता गरिरहेको छ, चाँडै समस्या समाधान हुने कुरा बुझिएको छ ।’
५ असार, काठमाडौं । मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले पिनाङस्थित घर फिर्ती केन्द्रमा अलपत्र परेका २८ नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काएको छ ।
दूतावासले आफ्नै पहलमा हवाई टिकटको खर्च बेहोर्न नसकी अलपत्र परेका नेपालीलाई नेपाल पठाएको हो । नेपाली दूतावासको टोलीले एक साताअघि ती नेपालीसँग पिनाङमा भेट गरेको थियो ।
दूतावासले क्वालालम्पुरमा अलपत्र परेका नेपालीलाई घर फिर्ता पठाउने अभियान निरन्तर रहने जनाएको छ । दूतावासका अनुसार शङ्खलाल गोले (पर्सा), मनिराम बेङ्गासी (धनुषा), सञ्जयकुमार नेपाली (सर्लाही), सनम लिम्बू (धनकुटा), दीपेश लिम्बू र राजकुमार राई (सुनसरी), सन्तोष अधिकारी (कपिलवस्तु), मुकेशराज यादव (रौतहट), मनोजकुमार नेपाली (सिन्धुली), मनबहादुर तामाङ (काभ्रेपलान्चोक), खड्का लिम्बू (ताप्लेजुङ), निकेश कार्की (काठमाडौँ), विवश राई (खोटाङ), मीनप्रसाद डोटेल (काभ्रेपलान्चोक) र सुदीप तामाङ (चितवन) लाई नेपाल फकाईएको छ ।
यस्तै सञ्जय मल्ल र दीपेन्द्रकुमार भण्डारी (रुकुम), राजअलि शाही (बाँके) जितनारायण यादव (सिरहा), इन्द्रबहादुर सार्की (गुल्मी), सन्चबहादुर लिम्बू (ताप्लेजुङ), गर्जेन्द्र घर्ती मगर (रोल्पा), टेकबहादुर राप्चा (ओखलढुङ्गा), गुलाब चौधरी (सुनसरी), भरतबहादुर बुढा मगर (दाङ), विदुर कार्की (झापा) र सञ्जीव बैजु (मकवानपुर)लाई स्वदेश फर्काइएको दूतावासले जनाएको छ । रासस
भारत र अमेरिकाको एउटै चासोः प्रचण्ड सरकारको विदेश नीतिले निरन्तरता पाओस्
२७ जेठ, काठमाडौं । भारत र अमेरिकाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अपनाएको विदेश नीति वर्तमान सरकारले निरन्तरता देओस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई टेलिफोन गरेर भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले यस्तो चाहना राखेकी हुन् ।
शुक्रबारै अमेरिकी राजदूत टेपलेट्जले महरासँग भेटेर अघिल्लो सरकारको विदेश नीतिमा जोड दिइन् ।
शुक्रबार नै दिउँसो पौने १ बजे विदेशमन्त्री स्वराजले उपप्रधानमन्त्री महरालाई दिल्लीबाट टेलिफोन गरेर बधाई दिएकी थिइन् ।
माओवादी केन्द्रका विदेश विभाग सदस्य एवं महराका प्रमुख स्वकीय सचिव युवराज चौलागईका अनुसार करिब १० मिनेट लामो कुराकानीमा स्वराजले विगतको निरन्तरता चाहेको बताएकी थिइन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
२० अप्रिल, मलेसिया । मलेसियाली नागरिकको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका एक नेपालीले यहाँको अदालतवाट न्याय पाएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको किमे–९, गुम्थाङ घर भएका लालबहादुर तामाङ अदालतको आदेशपछि मृत्युदण्ड पाउनबाट जोगिएका हुन् ।
तामाङ मलेसियाको एक सेक्युरिटि कम्पनीमा कार्यरत थिए ।
उनीमाथि ड्युटी समयमा मलेसियन नागरिक माथुभेलु ए गोविन्दनको हत्या गरेको आरोप थियो । यही आरोपमा १० नोभेम्बर २०१६ मा उनी पक्राउ परेका थिए ।
तामाङ पक्राउ परेसँगै मृत्युदण्ड सजायको माग गर्दै पेनलकोर्टमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
अदालतमा मुद्दा परेसँगै मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले झुठा मुद्दा लगाइएको भन्दै १४ जुन २०१६ मा अदालतमा निवेदन पेश गरेको थियो । मार्च ८ मा उच्च अदालत शाहआलमले उनी निर्दोष रहेको फैसला सुनाएको थियो ।
निर्दाेष ठहरिएका लामा नेपाली राजदूतावासको पहलमा वैशाख ६ गते नेपाल फर्किएका छन । ‘तामाङको मुद्दामा कानुनी परामर्शदाताको सहयोग महत्त्वपूर्ण रह्यो’ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डा. निरन्जनमानसिं वस्न्यातले अनलाइनखबरसँग भने ।
अठार जनाको एकै दिन उद्धार
उता, वुधवार नै नेपाली राजदूतावास मलेसियाले अवैधानिक अवस्थामा पक्राउ परी डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका १८ नेपालीको उद्दार गरेको छ । वुकित जलिल क्याम्पमा रहेका उनीहरुलाई उद्धार गरिएको हो । केही दिन अगाडि मात्रै नुवाकोटका विफ लामा, सिन्धुलीका लिला भोलन, भोजपुरका जयकुमार खवास, झापाका पदमवहादुर तामाङ, धनकुटाका धिरेन्द्र याक्खा, तनहुँका कमलवहादुर भुजेललाई पनि उद्धार गरी नेपाल पठाइएको थियो । नेपाल सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट हवाई टिकट खरिद गरेर नेपाल पठाइएको दूतावासले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।
२०७४ वैशाख ७ गते ७:३७ मा प्रकाशित
धेरै नेपाली कामदार पनि साउदीमा अवैध कामदारका रुपमा रहेकाले उनीहरुले आममाफीका सदुपयोग नगरे ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने छ ।
कम्तिमा ४ लाख २० हजार रुपैयाँदेखि २८ लाख रुपैयाँ अर्थात १५ हजार देखि १ लाख रियालसम्म जरिवाना लगाउने निर्णय साउदीले गरेको हो । साउदीको अध्यागमन विभागले यसरी जरिवाना तिरेर फर्किएकालाई फेरि साउदीमा आउन नदिने निर्णय पनि गरेको छ ।
आममाफीको प्रक्रिया चैत १६ गतेदेखि लागू हुनेछ । यसको ९० दिनको अवधिमा श्रम ऐन उल्लंघन गर्दै साउदी अरबमा कार्यरत विदेशी कामदारले विना सजाय देश छाड्न सक्नेछन् ।
यो अभियान १९ वटा सरकारी निकायहरुले सञ्चालनमा ल्याउने छन् । यस्तो सुविधा हज वा उम्राहको दर्शनको लागि आएर भिषा अवधि समप्त भएपछि पनि घर फिर्ता नभएका र भिसासँग सम्बनिधत अन्य मामिलामा पनि यो सुविधा लागू हुनेछ ।